Jabuuti waxa laga cabbaa biyo ay dhuumo kasoo qaadaan gobolka Shinniile ee dawlad deegaanka Soomaalida Ethopia – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Jabuuti waxa laga cabbaa biyo ay dhuumo kasoo qaadaan gobolka Shinniile ee...
Jabuuti waxa laga cabbaa biyo ay dhuumo kasoo qaadaan gobolka Shinniile ee dawlad deegaanka Soomaalida Ethopia
Sababtu waa Jabuuti oo aan lahayn meel ceelal biyood laga qodi karo.
Nolosha shacabkuna boqolkiiba sagaashan waxay ku tiirsantahay biyahaa Ethopia.
Laakiin xukuumadda Jabuuti waxa ay maanta warbaahinta u sheegtay in ay Somaliland ka caawin doonaan aqoonta dhinaca Biyaha maaddaama ay waftiga Somaliland ee u yimi ka dalbadeen in arrinkaa wax lagala qabto sida ay iyagu sheegeen.
Xogo kalena waxaa ay sheegayaan in Jabuuti waftiga Somaliland kala hadashay in loo oggolaado ceelal ay biyo kala soo baxaan oo dhuumo kasoo qaadaan in ay ka samaystaan deegaanka Tokhoshi oo Somaliland ka tirsan una dhow dhanka xadka Jabuuti.
Wasiirka arrimaha dibada Jabuuti oo kulanka Biixi iyo Geelle ka warramayay ayaa sidoo kale yidhi “waxa aanu ka shaqaynayaa muranka soohdimaha ee Kenya iyo Soomaaliya oo maalmahan cakiran.
Somaliland ayaan dhankeeda xog faahfaahsan ka bixin waxa kulanka lagaga wada hadlay.
Xigasho: Sidiiq Burmad
Previous articleWaa maxay Fursadaha iyo caqabaha uu biyo-xidheenka wayn ee Ethiopia uu u leeyahay Somaliland ?
Next articleSaxafi dulyar oo lagu xidhey Beledweyne
MADAXWEYNE FARMAAJO OO SHIR UGU BAAQAY MADAXDA DOWLAD GOBOLEEDYADA IYO G/BANAADIR